Telefoonka: 0086-18259005648 / 86-591-83568232
FLEETGUARD LF3524 Saliid / Lube ...
OEM Heerka FLEETGUARD LF3 ...
Kala Soocaha Biyaha Shiidaalka
Sida uu u shaqeeyo kalasooca biyaha miiraha shidaalka？ 1. Shidaalku wuxuu galaa godadka miiraha dhuunta ee saxanka baffle / dunta. 2. Wasakhda iyo qashinka ayaa laga saaraa shidaalka markay marayaan miiraha. 3. Warbaahinta shaandhada ku takhasustay ee kaydadka ku jirta ayaa biyaha ka saarta shidaalka. 4. Isku-xidhka biyaha ee dhibco waaweyn oo ku sii qulqulaya god hoose oo ka mid ah saxanka wareega ama wareega. 5. Shidaal nadiif ah ayaa ka baxa miiraha iyada oo la marinayo tuubada dhexe. 6. Biyuhu waxay u baahan yihiin hawl-wade maalinle ah ka shubaya. Biyo ikhtiyaari ah ...
Shaandheeyeyaasha Spin-on Water Coolant
Nambarka OEM TW4003 Oo Bedelaya FLEETGUARD: WF2073 CUMMINS: 3315115 4058964 3100306MITSUBISHI: ME065322KOMATSU: 6742-01-3980 1261388H1HYUNDAI: 11E1-70310HITACHI: Mashiinka 1101 mitir -16 Sharaxaad Mack filter shidaalka Mack for Truck, cagaf, trailer, excavator, baabuur Cabirka OEM Heerarka caadiga ah Sifeynta Biyaha ayaa la xaqiijiyay inay yareyneyso duugista iyo inay ilaaliso kuleylka wax ku oolka ah ...
Waxqabadka Sare ee Filterka Qaboojiyaha Biyaha Heerka Sare
Sida uu u shaqeeyo kalasooca biyaha miiraha shidaalka 1. Shidaalku wuxuu galaa godadka miiraha dhuunta ee saxanka baffle / thread 2. Wasakhda iyo burburka ayaa laga saaraa shidaalka la sii daayo markay marayaan miiraha. 3. Warbaahinta shaandhada ku takhasustay ee kaydadka ku jirta ayaa biyaha ka saarta shidaalka. 4. Isku-xidhka biyaha ee dhibco waaweyn oo ku sii qulqulaya god hoose oo ka mid ah saxanka wareega ama wareega. 5. Shidaal nadiif ah ayaa ka baxa miiraha iyada oo la marinayo tuubada dhexe. 6. Biyuhu waxay u baahan yihiin hawl-wade maalinle ah ka shubaya. Xulashada biyaha ee ikhtiyaariga ah ...
Kala Soocaha Biyaha Shiidaalka Tayada Sare
OEM Number TS0207 Bedelaad FLEETGUARD: FS19754RACOR: R120PWIX: 33774ISUZU: 8-97605118-0 8-97605118-1 Codsiga Gawaarida ama bedelka naaftada kale, mashiinada dhismaha Wareega Jirka Baaxadda: 108.5mm Heer: 218mmThread Size: 1 ″ -14 Description Mack For Truck, cagaf, trailer, qod, car cabirka OEM Heerarka Tilmaamaha Sifeynta biyaha ayaa la xaqiijiyay inay yareyneyso duugga iyo inay ilaaliso kala wareejinta kuleylka wax ku oolka ah Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay qaboojiyeyaasha ...
Mishiinka Xamuulka Gawaarida Xeedho & Sifeeyaha Kala Soocaha Biyaha
OEM Numberka TS3001 wuxuu badalayaa FLEETGUARD FS1006 FF5693 FS1013 FS19870 FS19841Monbow MB-CX562CUMMINS 3089916 4096308 4095190 4095189HITACHI E12979376KOMATSU 600-311-31 Shidaalka & kalasooca kala sifeeyaha Mack Gawaarida, cagaf, isjiidjiid, qod, gawaarida Cabbirka OEM Heerarka Tilmaamaha Ka saar wasakhda hawada iyo ilaali mashiinka Dhexdhexaadka Qalabka HV-ga Maraykanka / Xawaaladda ...